Madaxweyne Farmaajo oo rajo wanaagsan ka muujiyay miro-dhalka Shirkii Africa Now (Daawo) – Idil News
Madaxweyne Farmaajo oo rajo wanaagsan ka muujiyay miro-dhalka Shirkii Africa Now (Daawo)
KAMPALA (IDIL NEWS)-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa raja wanaagsan ka muujiyay miro dhalka natiijo ka soo baxda shirka “Africa Now” ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Kampala.
Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeediyay shirka ayaa ku nuux-nuuxsaday muhiimadda kulanka, wuxuuna ku tilmaamay mid daaha ka rogaya Taariikhda iyo barwaaqada Afrika.
Waxaa uu sheegay in hadda loo baahan yahay hoggaan dar-dargeliya isbeddelka Bulsho iyo dhaqaale ee Afrika, sidoo kalena loo baahan yahay in la yagleelo mustaqbal waxtar u leh dhallinyarada iyo Haweenka Afrika, inaan fahanno isla markaana ka hortagno saamaynta is-beddelka cimilladu ku yeelanayo koboca dhaqaalaha iyo inaan xal heer degmo, heer Qaran iyo heer Caalami ah u helno caqabadaha aynu wadaagno , sida kuwa ganacsiga iyo amniga.
“Hadda ayaynu u baahan nahay inaynu isku xirno dhaqaaleheenna innaga oo adeegsanayna kaabayaal dhaqaale oo muuqda iyo kuwa casriga ah, si aan u helno Afrika is-dhexgalkeedu sarreeyo, nabdoon isla markaana dhaqaaleheedu kobcayo”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa sheegay in uu ku rajo weyn yahay inaan ka qaarad ahaan gaari karno himmilooyinkeenna haddii aan xoojinno iskaashigeenna, wuxuuna caddeeyay in aysan jirin caqabad aan laga gudbi karin, buur aan la fanan karin iyo meel aan la gaari karin, haddii la helo ujeeddo guud iyo dedaal dhankeenna ka yimaadda.
Madaxweynaha ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la huro Khibraddeenna si loogu faa’iideysto khayraadka dabiiciga , wuxuuna intaa raaciyay inaan arrinta saboolnimada aan mar danbe loo adkaysan Karin maadaama uu caalamku isu soo dhawaanayo, Qaarad kastana ay innaga horumarayso.
Waxaa uu sheegay in ay cid kasta mas’uuliyad ka saaran tahay dib u habaynta, horumarinta, is-dhex galka iyo kobaca dhaqaalaha Afrika,wuxuuna tilmaamay in lasoo dhaafay xilligii Dowladda wax walba laga sugi lahaa, loona baahan yahay in hoggaamiyeyaasha Ganacsiga iyo muwaaddiniintu ay si dhow u wada shaqeeyaan.
“Fursadaha horyaalla Afrika waa tiro badan yihiin. Waxaan leennahay dhalliyaro da’ ahaan aad u yar, dhul qiimo badan, khayraad badeed iyo dhaqan soo jireen ah oo iskaashi iyo is-taageerid ku dhisan. Sidoo kale, teknaloojiyadda iyo isbeddelka ku yimi adeegyada dowladda ee asaasiga ah sida waxbarashada iyo caafimaadka awgeed, ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa sheegay in Afrika ay fursad u haysato inay hormuud ka noqoto dhinacyo badan oo fure u ah horumarkeenna , sida warshadaha, isu socodka alaabada iyo dhaqaalaha casriga ah, iyada oo aynu weli ku xooggan nahay Beeraha iyo dhinacyada kale ee soo jireenka ah.